संवैधानिक व्यवस्थालाई नेकपाको सरकारले अब मान्ने कि नमान्ने ?(भिडियो सहित) - हिमाल दैनिक
संवैधानिक व्यवस्थालाई नेकपाको सरकारले अब मान्ने कि नमान्ने ?(भिडियो सहित)
२४ पुष २०७६, बिहीबार १७:२३
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काग्रेसले सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गरेको छ । बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेस सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभामुख चयन प्रक्रियालाई आगामी बैठकबाट कुनै पनि हालतमा अघि बढाउन सरकारसँग माग गरे ।
मुलुकको सभामुख निर्वाचन या प्रदेश नामकरण संविधान भावना, प्रदेश नियमावलीअनुसार हुने विषय भएको भन्दै उनले यसलाई कुनै दलका कारण हस्तक्षेप हुन नहुने तर्क गरे । सभामुख चयनमा भइरहेको ढिलासुस्ती र ३ नम्बर प्रदेशको नामकरण, राजधानी तोक्न नेकपा सचिवालयले प्रदेश कमिटी र प्रदेश सभालाई दिएको निर्देशनले संघीय संसद्को मानहानी भइरहेको सांसद देवले बताए।
संवैधानिक व्यवस्थालाई नेकपाले अब मान्ने कि नमान्ने ?
संवैधानिक व्यवस्थालाई मान्ने कि नमान्ने ? लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई मान्‍ने कि नमान्‍ने ? जनताको बहुदलीय जनवादको चुरोलाई मान्‍ने की नमान्‍ने नेकपाले अब ? कि छोड्यो त्यो बाटो ? के साच्चि कै त्यो बाटो छोड्यो ?अब गयो अर्को बाटोमा ? एकदलिय तानाशाहीको बाटोमा गयो? एक नेताको तानाशाहीको बाटोमा गयो त ?
Posted by Himal Dainik on Thursday, January 9, 2020
संविधान र संघीय संसद् र प्रदेशसभा नियमावलीले प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्, सभामुख उपसभामुको निर्वाचन कसरी हुने प्रदेशसभाको राजधानी निरुपण कसरी गर्ने, नाम के राख्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै सांसद देवले यी समस्यालाई धेरै दिन अड्काएर राख्न नहुने जिकिर गरे । उनले जनताको बहुदलीय जनवादको नारा अघि सारेको नेकपालाई सही अर्थमा लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको प्रमाणित गरेर देखाउन आग्रह गरे ।
काँग्रेसकै राधेश्याम अधिकारीले सभामा पेश भएका विधेयकमा उठेका सवाललाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । पेश गरिएका विधेयकका कतिपय प्रावधान मौलिक हकसँग बाझिएको छ भन्दै उनले त्यसलाई सच्याएर लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
नेकपाका रामनाराण बिंडारीले बढ्दो सडक दुर्घटनाका कारण नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ भन्दै सडक सुरक्षामा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे।
सडक बनाउनु पर्यो, मर्मत गर्नुपर्यो सडकको सिदान्त के हो?:बिडारी
नेकपाको नयाँ सरकार आयो। तर पुराना ड्राइभरले भने रक्सि खाएर,धवार धवार धुवा फाल्ने यता मोड्यो उता फर्किने गाडी चलाउन छाडेनन्
बैठकले बिभिन्न दुई विधेयक पारित गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, २०७६ र ‘राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।
विषयगत समितिमा भएको छलफल र परिमार्जनलाई स्वीकार्दै विधेयक पारित गरिएको हो । बैठकले नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकमा ‘रेल्वे विधेयक, २०७६’ पेश भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीका तर्फबाट डा खतिवडाले उक्त विधेयक पेश गर्नुभएको हो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही पुस २७ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।
Prevपछिल्लोनेप्सेमा झिनो सुधार
अघिल्लोपश्चिम एशियामा विकसित घटनाप्रति नेपालको गम्भीर चासो(विज्ञप्ति सहित)Next